Ogaden News Agency (ONA) – Shir lagaga hadlay Ogadenya iyo Xuquuqda aadanaha ee ka jirta ayaa lagu qabtay Pretoria
Shir lagaga hadlay Ogadenya iyo Xuquuqda aadanaha ee ka jirta ayaa lagu qabtay Pretoria
Posted by ONA Admin	/ November 28, 2013
Shir ay si heer sare ah u soo qaban qaabiyeen Ururada OYSU iyo YOUTH human righs international oo lagaga hadlayay xaalada Ogadenia ayaa maalinkii shalay ka dhacayay magaalada Pretoria.
Shirkan oo ajandihiisu ahaa xaalada aadami ee Ogadenia iyo sidii tubta xoriyada Ogadenia loo qaadsiin lahaa ayaaa siwanaagsan loo lafaguray amuuraha cakiran ee gobolka, habka ugu wanaagsan ee looga bixikaro iyo sidii xoriyada dadka oagdenia loo gaadhsiin lahaa xaquuqdoodana loo dhawri lahaa.
waxaa shirka lagu soo bandhigay warbixino ka xogwaramaya xaaladda uu ku sugan yahay dalka Ogadenya iyo tacadiyadda badheedhka ah ee shacabka loo gaysanayo oo ciidamada Itobiya ay ka wado dalka.
Ugu danbyntii waxay qaybaha shirka wada qabtay iyo haya’do kaleeto oo guubjoog ahaaba hoosta ka xariiqeen go’aamo wax ku ool ah oo loogu talagalay wax ka badalka xalada Ogadenia iyo dhawrista xuquuqda dadka gobolka waxaana kamid ahaa go’aamadaas in lasameeyo koox iskudhaf ah oo kakooban ururada bulashada wadankan S.Africa iyo jaaliyaadka iyo ururada bulshada ogadenia oo iska kaashada sidii indhaha caalamka lootusi lahaa xaalada aadaminimo ee ogadenia.
Waxaa sidoo kale laysku waafaqay in shirar kale lasoo qorsheeyo si loo asteeyo tubta ugu haboon ee lagu jabinkaro cunaqabataynta caalamiga ah ee Ogadeeniya saran gaar ahaan dhanka warbaahinta si loo soo arko waxa kataagan gobolka.